REPUBLICADAINIK | कांग्रेस मिल्यौँ भने कम्युनिस्टहरूको पत्तासाफ हुन्छः योगेन्द्र चौधरी (अन्तर्वार्ता) - REPUBLICADAINIK
कांग्रेस मिल्यौँ भने कम्युनिस्टहरूको पत्तासाफ हुन्छः योगेन्द्र चौधरी (अन्तर्वार्ता)
धेरै लामो समयपछि आएर विजय गच्छदारलाई पार्टीको उपसभापति बनाएर एउटा समायोजन प्रक्रियाको पहिलो खुड्किलो चाहिँ पार भयो ।
त्यो सँगसँगै हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ कि अब बाँकी कामहरू पनि यसै गरी तीब्रता पाउनेछ भन्ने कुरामा । तर, अहिलेसम्म हामी अन्यौलताको बीचमा गुज्रीरहेका छौँ । यसबाट हामीलाई चिन्ता लागेको छ । हामीसँगै राजनीतिक भविष्य जोडिएका साथीहरू हुनुहुन्छ । यो अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा कांग्रेस थप बलियो हुनुपर्छ ।
हो नेपाली कांग्रेसले पुराना साथीहरूको सदस्यतालाई नवीकरण गर्ने कुराहरू उठाइरहेको छ । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । नवीकरणका लागि फागुन २५ गतेसम्म सबै फारमहरू बुझाइ सक्ने भन्ने कुरा पनि सुनेको छु । तर, हाम्रा साथीहरू के गर्ने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । हाम्रो सक्रिय सदस्यता के हुन्छ भनेर प्रश्न उठाइरहेको स्थितिमा हामीले सहि जवाफ दिने स्थिति छैन ।
यही हो भन्ने कुरा हामीलाई पनि अहिले अन्यौल भैरहेको बेला हामीले के जवाफ दिने हो भन्ने अन्यौलताबाट हामी गुज्रीरहेका छौँ । तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकमा हामी नेताको हैसियतमा थियौँ । म आफै पनि महामन्त्री थिएँ । हाम्रो स्थिति यो बनेको छ । त्यसैले हामीलाई निरास चाहिँ बनाएको छ । जुन उर्जा थियो त्यो उर्जा चाहिँ छैन ।
कांग्रेसभित्रको गुट र उपगुटको राजनीतिक चपेटामा हामी परेका छौँ । त्यसमा फस्यौँ कि जस्तो लागिरहेको छ । पार्टी समायोजनमा समस्या परेको छ । ढिलाइ भएको छ । एउटा मनोविज्ञानले के काम गरिरहेको छ भने विजय गच्छदारबाट आएका सबै साथीहरू विजय गच्छदारकै हुन् त्यसैले उनीहरूलाई समायोजन गर्दा र पोर्टफोलियोमा ल्याउँदा विजय गच्छदार बलियो हुने हो कि भन्ने एउटा मनोविज्ञानले काम गरेको जस्तो लागेको छ ।
यो सोँचलाई विजय गच्छदारका साथीहरू सबै जोडिदा खेरी उनीहरूको उर्जा नेपाली कांग्रेसको निम्ती प्रयोग हुनेछ र नेपाली कांग्रेस बलियो हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोँच भैदिएको भए समायोजनको कुराले तिब्रता पाउने थियो । यहाँ त व्यक्ति बलियो हुने हो कि भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित भएको हामी पाइरहेका छौँ ।
हामी कुनै व्यक्तिलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि निम्ती एउटा दह्रो लोकतान्त्रिक पार्टी चाहिन्छ । त्यसको निम्ती नेपाली कांग्रेस बाहेक अर्को पार्टीको विकल्प छैन ।
यो विषम परिस्थितिमा जहाँ कम्युनिस्टहरू एक भएको स्थितिमा हामी लोकतन्त्रवादीहरू एक भएर थप लोकतान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउनु पर्छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राखेर कांग्रेसभित्र आएका छौँ । हाम्रो व्यवहार पनि त्यही मुताविक हुनेछ । कुनै व्यक्तिलाई भन्दा पनि संस्था कसरी बलियो बनाउने ? र त्यो संस्थाले मुलुकको नेतृत्व गर्नमा कसरी सक्षम हुन्छ ? भन्ने चिन्ताबाट हामी बढ्ता चिन्तित छौँ ।
त्यो शक्ति (कम्युनिस्टहरू)लाई हामीले परास्त गर्नका निम्ती तिनले गरेका गलत काम, निर्वाचनका बेला जुन नारा दिएर सरकारमा आए या बलियो भए, सरकार बनाएपछि तिनका हर्कतहरू, तिनका गतिविधि र क्रियाकलापहरू जनविरोधी छन् भन्ने कुराहरू पनि एउटा महत्वपूर्ण कुरा लाग्छ । यसलाई जनता समक्ष कांग्रेसले जानकारी गराउनु पर्छ ।
कम्युनिस्टहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । गाउँका जनतालाई यसको जानकारी दिनुपर्छ । यसका निम्ती पनि कांग्रेस एक भयो भने, एक आवाज लिएर गयो भने यिनले गरेका जनविरोधी कामका बारेमा जनतालाई बुझाउने कुरा, जनतासँग साक्षत्कार गर्ने कुराहरूमा पनि त पहिला हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्छ नि । होइन र ?
हामी आफूभित्र रहेका गुट उपगुट र व्यक्तिगत स्वार्थ भुलेर एकजुट हुने हो वा मिल्ने हो भने कम्युनिस्टहरूको पत्तासाफ गर्न सक्छौँ । कांग्रेसलाई अहिले पनि जनताको अपार साथ छ ।
प्रदेश ५ को राजधानीको विषय महत्वपूर्ण कुरा बनेको छ । राजधानी दाङमा बन्ने कुरा सबै साझा एजेण्डा बनेको कुरालाई जबरजस्त रुपमा बुटवलमा लग्ने दुस्प्रयास गरियो । प्रतिनिधि सभाको सभामुख कृष्णबहादुर महराजी पनि दाङ जिल्लाकै हुनुहुन्छ । प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलजी पनि दाङकै हुनुहुन्छ । यति ठूलो शक्ति र कुर्सीमा बसेको बेला पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले दाङ जिल्लाको अपेक्षा पूरा गर्न सक्नुभएको छैन ।
उहाँहरूले निरिहता देखाइ रहनु भएको छ । दाङ जिल्लाबासीले यसको मूल्यांकन गरेका छन् । उहाँहरूले दाङलाई प्रदेश ५ को राजधानी बनाउने भनेर निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष भन्नुभएको थियो । अहिले आएर महराजी र पोखरेलजीले मतदाता समक्ष गरेको प्रतिवद्धता भुल्नु भएको छ । हामी त दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमै छौँ । आफ्नो ठाउँबाट दवाव दिइरहेका छौँ ।
म सांसद भएका बेला जति कामहरू गर्‍यौँ दाङ जिल्लाको निम्ती त्यति मात्रै अहिलेको सांसदहरू या अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार र नेताहरूले गरिदिए भने म व्यक्तिगत रुपमा उहाँहरूलाई धन्यावाद दिन्छु ।
दीपक गिरी सिचाइँ मन्त्री हुँदा मलाई लाग्छ अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो योजना राप्ती नदीको निम्ती लगेको ढेड अर्बको योजना उहाँले नै राप्ती नदी तटबन्धनको योजना आफ्नो पालामा लगेको योजना हो । के त्यो सामान्य योजना थियो र ? त्यसैले विविध योजनाहरू हामीले देउखुरी विकासको निम्ती लग्यौँ । लमहीमा रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई हामीले अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गर्‍यौँ ।
तत्कालीन रामजनम चौधरीजी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा हामीले मैले व्यक्तिगत पहलमा आग्रह गरेर लमही स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गरेको हुँ । यी त मैले ठूला योजनाहरू भने । बाँकी जनताको सेवा गर्ने कुरा, जनताको पीरमर्का बुझ्ने कुराहरू हामीले नियमित रुपमा जनताकै सम्पर्कमा रहेर गर्‍यौँ । अहिलेका सांसदहरू यति कुरा गरिदिए पनि मैले व्यक्तिगत रुपमा धन्यावाद दिन्छु । मैले गरे जति काम गरुन् भन्ने मेरो चुनौती हो । हावा कुरा गरेर हुँदैन । परिणाम दिनुपर्छ । हामीले त्यस बेला साढे तीन वर्ष काम गर्‍यौँ । जति गर्‍यौँ राम्रो गरेका छौँ ।
Published : Friday, 2019 March 8, 1:20 pm